ဂိုးရယ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဂိုးရယ် (အင်္ဂလိပ်: Goral) သည် Nemorhaedus သို့မဟုတ် Naemorhedus ဟူသော မျိုးစု၌ မျိုးစိတ် လေးခု ရှိသည်။ ဆိတ်လိုလို ဒရယ်ငယ်လိုလို ပုံပန်းသွင်ပြင်ရှိသော ခွာပါသည့် အကောင်ငယ်မျိုး ဖြစ်သည်။
မူရင်းအမည်မှာ လက်တင်စာလုံးဖြစ်သည့် nemor-haedus ဖြစ်ကာ nemus, nemoris သူဌေးနှင့် haedus ဆိတ်ကလေး ကို ပေါင်းထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆိတ်သူဌေးလေးဟု ဆိုလိုဟန်ရှိသည်။ ဟမီတန် စမစ်က Naemorhedus ဟု စာလုံးမှားပေါင်းမိသောကြောင့် ထိုအမည် တွင်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။  
မကြာသေးခင်အထိ ဤမျိုးစုတွင် ဆီးရိုးတောဆိတ် မျိုးစိတ်(ယခု ကပရိကောနစ် Capricornis မျိုးစု၌)လည်း ပါသည်။ ဂိုးရယ်ဆိုသော အမည်သည် ဟိမဝန္တာဂိုးရယ်ဟူသော အရှေ့အိန္ဒိယစကားလုံးမှ လာသည်။ ဂိုးရယ်မျိုးစိတ် လေးမျိုးမှာ-
ဟိမဝန္တာဂိုးရယ်၊ (ဂူးရယ်ဟုလည်း ခေါ်)၊ နယ်မောဟဒပ် ဂိုးရယ်(Naemorhedus goral)၊ နီပေါနှင့် ဘူတန်နှင့် အလားတူပင် အိန္ဒိယအနောက်မြောက်နှင့် အရှေ့မြောက်တို့တွင် အလေ့ကျနေထိုင်။
မြီးရှည်ဂိုးရယ်၊ နယ်မောဟဒပ် ကော်ဒတပ်(Naemorhedus caudatus)၊ ထိုင်းအနောက်ပိုင်း၊ မြန်မာအရှေ့ပိုင်းကို ဖြတ်ကျော်၍ တရုတ်နှင့် ရုရှားတို့၌ တွေ့ရှိ။ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ပေါ်ရှိ စစ်မဲ့ဇုံ၌လည်း အတော်များများ တွေ့ရှိ။
ဂိုးရယ်နီ၊ နယ်မောဟဒပ် ပိုင်လဲ့ရီ(Naemorhedus baileyi)၊ တရုတ်ပြည်၊ ယူနယ်ပြည်မှ တိဘက်၊ အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်အပြင် မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း၌လည်း ကျက်စား။
တရုတ်ဂိုးရယ်၊ နယ်မောဟဒပ် ဂရိရှပ်(Naemorhedus griseus)၊ မြန်မာ၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်နှင့် လာအို(ဖြစ်နိုင်ခြေရှိ)တို့၌ ပြန့်နှံ့နေထိုင်။
ဂိုးရယ်များကို မကြာခဏဆိုသလိုပင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် အလွန်မြင့်သော ကျောက်ဆောင်ပေါများသည့် တောင်စောင်းများ၌ တွေ့ရသည်။ ၎င်းတို့ ကျက်စားရာနယ်မြေများသည် မျိုးဆက်စပ်သော ဆီးရိုးတောဆိတ်များ၏ ကျက်စားရာနယ်နှင့် မကြာမကြာ ထိပ်တိုက်တွေ့လေ့ရှိသော်လည်း၊ ဂိုးရယ်တို့သည် အပင်နည်းနည်းသာ ပေါက်သော ပိုမြင့်၊ ပိုမတ်စောက်သည့် တောင်စောင်းများ၌ တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
ဂိုးရယ်သည် စံအားဖြင့် ၂၅ - ၄၀ ကီလို လေးပြီး၊ အလျားအားဖြင့် ၈၀ - ၁၃၀ စင်တီမီတာ ရှည်ကာ၊ တိုပြီးနောက်လှန်နေသော ဦးချိုများ ပိုင်ဆိုင်သည်။ မျိုးစိတ်အချင်းချင်း၊ တကောင်နှင် တကောင် ရောင်စဉ် မတူပေ၊ ယေဘုယျအားဖြင့် မီးခိုရောင်ဖျော့ဖျော့မှ နီညိုရင့်ရောင်ထိ အစားစား ရှိကာ၊ ရင်ဘတ်၊ လည်ပင်း၊ နှင့် ဝမ်းဗိုက်ပိုင်း၌ အရောင်ပိုဖျော့ပြီး၊ ကျောရိုးတလျှောက် အနက်စင်း တကြောင်း ရှိသည်။ ရှည်လျားလှသော သားမွေးများကြောင့်၊ သူတို့ကို မကြာခဏ တွေ့လေ့ရှိသော အေးသောအရပ်ဒေသ၌ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ကာကွယ်နေနိုင်လေသည်။
မျိုးရိုးများ တူညီ ကြသော်လည်း၊ ဂိုးရယ်များသည် ဒရယ်ငယ်များထက် ပိုတုတ်ခိုင်ပြီး၊ ခွာများမှာ ပိုကြီး၊ ပိုလေးသည်။ ဂိုးရယ်မသည် လုပ်ဆောင်နိုင်သော နို့သီးခေါင်း လေးခု ရှိပြီးလျှင်၊ ဆိတ်မ၊ သိုးမများတွင်မူ လုပ်ဆောင်နိုင်သော နို့သီးခေါင်း နှစ်ခုသာ ရှိသည်။ ဆီးရိုးတောဆိတ်များနှင့် မတူသည်မှာ၊ ဂိုးရယ်တို့တွင် အလုပ်လုပ်နိုင်သော မျက်လုံးရှေ့ဂလင်း မပါရှိချေ။
↑ Grubb၊ P. (16 November 2005)။ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M. (eds.)။ Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed.)။ Johns Hopkins University Press။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။ CS1 maint: ref=harv (link)
↑ Groves, C. P., and Grubb, P., 1985, Reclassification of the serows and gorals (Nemorhaedus: Bovidae).
↑ Article 32.5.1. Archived 14 March 2016 at the Wayback Machine. of International Commission on Zoological Nomenclature reads: "If there is in the original publication itself, without recourse to any external source of information, clear evidence of an inadvertent error, such asalapsus calami oracopyist's or printer's error, it must be corrected."
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂိုးရယ်&oldid=639169" မှ ရယူရန်
ရုရှားနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော နို့တိုက်သတ္တဝါများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။